लकडाउनको उपहासः 'सामाजिक दुरी कायम गर्नै मुश्किल' - साक्षी खबर लकडाउनको उपहासः 'सामाजिक दुरी कायम गर्नै मुश्किल' - साक्षी खबर
चैत्र २३, २०७६ | ६४२४७ पटक पढिएको
शनिवार विहानको रेडियोमा तनहुँको सव्जिमण्डमा अस्वाभाविक भिड बढ्नथालेपनि अनिश्चित कालका लागि स्थानीय प्रशासनले बन्द गरेको समाचार सुन्दा तुलसीपुरको सब्जिमण्ड झल्झल्ती सम्झें, किनकि त्यहाँको अवस्था हाटबजारको जस्तै थियो ।
आईतबार बिहानै तुलसीपुरमा भेटिएका ट्राफिक प्रहरीका डिल्ली आचार्यले भनिरहेका थिए, दाई आज त तुलसीपुर बजारमा झनै चहलपहल बढि छ । मानौं नेपालबन्दमा गाडि नचलेर यात्रुहरु पैदल गन्तव्यतीर सोझिएका छन् । ‘सामाजिक दुरी कायम भएको मलाई अनुभुति हुन सकेन, किनकि प्रहरी र प्रशासनले जतिसुकै आग्रह गरेपनि नागरिकले यसलाई आत्मानुभुति गर्न सकिरहेका छैनन्’, उनकै अभिव्यक्ति थियो यो । बेचैन मुडमा बिजौरीमा भेटिएका थिए उनी ।
झसंग मैले घरमै रहनुभएका वृद्ध बुवालाइ सम्झें । उनले सधैंजसो गाउँलेहरुलाई झारफुक गर्ने गरेपनि लकडाउनको समयमा पुरै सेफ हुनुहुन्छ, झारफुक समेत बन्द गर्नुभएको छ अहिले । हामीलाइ पनि घरवाहिर नजानै घरीघरी आग्रह गरीरहनुहुन्छ, घरमा छिर्नेवित्तिकै सावुनपानीले हातधुन आग्रह गर्नुहुन्छ । तर युवाजमातमा भने अझैपनि यस्तो सुझ देखिन्न ।
घरनजिकैको चियापशलमा अझैपनि दुईचारजनाको जमघट चलिनै रहन्छ, सबैले मलाइ के भएको छ र ? यस्तै भनिरहंदा सामाजिक दुरीका विषयमा ख्यालै गरेको पाइदैन । प्रहरीको रुट छलेर मोटरसाइकलमा हुइकिनेहरुको सोंचाइमा कत्तिपनि परिवर्तन आएको छैन, दुईसय मिटरको दुरीमा पटक पटक बाइकिङ गर्ने प्रवृत्ति रोकिएन’—तुलसीपुर उपमहानगरपालिका—१७ का वडासचिव गेहराज पौडेल भन्छन्, अहिले सरकारप्रति गुनासो गर्नुभन्दा नागरिकहरुको सोंचाइमै समस्या छ । किनकि लकडाउन बजार र हाइवेमा र केहि बस्तीहरुमा मात्र कायम हुन सकेको छ, अन्यथा लकडाउनको मर्म लागु हुन सकेको छैन ।
काडमाण्डौबाट माइलादाजु ऋषिकेश रिजालले शनिवार राती फोन गरेका थिए । यहां त लकडाउन पुरै कार्यान्वयन भएको छ, घरवाहिर ननिस्केको पुरै दुइ साता भयो, त्यहाँ खतरा छ, घरमै बस्नु है । तर यहां त मैले त्यस्तो अनुभुति गर्नै पाएको छैन । सुन्छु घरघरमै टाइमपासकालागी तास खेलिन्छन् रे । सुटुक्क पाँच÷६ जना मिलेर । तास खेलिरहंदा सामाजिक दुरी कसरी कायम हुन सक्छ र । आफै नमरी स्वर्ग देखिन्न ?
तीन साता पहिले इटलीमा पनि यस्तै थियो, फेसबुक वालमा विष्णु पौडेलले लेखेका थिए, इटली सरकारले जनतालाई घरबाहिर ननिस्क भनेको जनताले मानेनन्, किनकि इटलियनहरु बढि सौखिन थिए, मजा र मनोरन्जन त्याग्न सकेनन्, अहिले यति असहज नियति भोगिरहेका छन् । स्पेनमा पनि लकडाउनलाइ बेवास्ता गर्दा त्यस्तै हविगत भयो । नेपालका गाउँगाउँमा भने अझैपनि चेतना फुरेको छैन । घरघरमा चुकुल लगाएर हुने जमघटलाइ प्रहरी प्रशासनले कसरी निस्तेजगर्न सक्छ र ? जब नागरिकनै बेवास्ता गरिरहेका छन् भने ।
कतैकतै सजगता पनि दखेको थिएं मैले । अघिल्लो सोमवार देउखुरीको फलकापुरमा आफन्त बितेको बेला मानोमिसाउन जाँदा एउटा टोल बस्तीमा छिर्ने सडकमै सवारीसाधन चल्न रोक मात्र लगाइएको थिएन, नयाँ अनुहार बस्तीमा छिर्दा कहाँबाट किन आउनुभो भनेर सोधिखोधि पनि हुन्थ्यो । तर दाङमा भने त्यस्तो देखिएन । विजौरी बजार अनुगमनका क्रममा पनि खासै उल्लेख्य रुपमा सामाजिक दुरी कायम गरेको अवस्था देखिएन । तुलसीपुर बजारमा त झनै समस्या । विहान ६ बजेदेखि ९ बजेको समयमा त मेला महोत्सवजस्तै हुन्छ बजार । कहिले कार्यान्वयन होला? सामाजिक दुरी ? सामाजिक दुरी कायम नगर्ने सवालमा अझै पनि समस्या छ । किनकि हामीमा एकले अर्कालाइ निगरानी गर्ने प्रबृत्ति पनि छैन, शंका गर्ने प्रबृत्ति पनि छैन । परिवारको एक जना सदस्य मात्रै संक्रमित भयो भने त्यस फैलावट जंगलमा लागेको डढेलो जस्तै हुनेछ । कम्तिमा पनि एक महिना सामाजिक दुरी कायम गर्यौ भने…..। जोगिन सक्छौं, जोगाउन सक्छौं, कोभिड—१९ को संक्रमण ।
Picture: विजौरी उद्योग वाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष कमानसिह खड्काको किराना पशलमा सामान किन्नकालागी सामाजिक दुरी कायमगर्दै सामान खरीदगर्ने उपभोक्ताहरु । तस्वीर: राकेश बस्नेत ।